Horumarka Guryeynta iyo Dhaqaalaha ee Gobolka Twin Cities
Xoojinta Xiriirka Khatarta ah ee Dhexdhexaadinta Guriyeynta iyo Goobta Dhaqaalaha ee Gobolka
Qalab ku filan oo guriyaal ah oo la awoodi karo qoysaska ka soo jeeda qiyaasta dakhliga ayaa muhiim u ah taageerida dhaqaale goboleed oo firfircoon oo joogto ah. Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo guriyeynta Minnesota iyo darawalnimada koowaad ee baahida guryaha ayaa ballaarinaysa saldhigga shaqada ee Minneapolis-St. Gobolka Bawlos.
Maanta, gobolka Twin Cities waxay ku tartamayaan shaqaalaha magaalooyinka sida Chicago, Seattle, iyo Denver, waxayna leeyihiin faa'iido marka la eego kharashka guryaha iyo helitaanka guryeynta. Laakiin sii kordhaya, gobolku wuxuu la tartami doonaa Austin, Nashville, iyo St. Louis, halkaas oo fursadaha guryaha ay aad u awoodaan oo ay u kala duwan yihiin kuwa ku nool gobolka Twin Cities. Goobahan iyo kuwa ku dhow dhowba waxay yihiin kuwo la awoodi karo, xitaa ka dib marka ay tixgeliyaan kala duwanaanta mushaharka ee gobollada.
Warbixintan waxay sahamisay xidhiidhka ka dhexeeya hanti-u-helidda guryaha iyo barwaaqada Twin Cities ee barwaaqada dhaqaalaha waxayna qiyaaseysaa baahida guriyeynta ee gobolka ee soo socota 20ka sano ee soo socda (2018-2038).
Akhri warbixinta buuxdaAkhri guud Guud